Fahazarana fampiasana • Yurie BSF
Tongasoa eto amin'ny tranonkala digital Maggot YurieBSF. Ny TOS (fepetra fampiasana) na ny fepetran'ny serivisy dia singa iray amin'ny serivisy izay tsy maintsy arahin'ny roa tonta amin'ny fitsipika mifandraika amin'izany. Ny fitsipika ananantsika dia tsy mahakasika ny raharaha toy ny fanitsakitsahana ny lalàna fiarovana ny mpanjifa, ary ny fepetra azo ekena ara-dalàna. Azontsika atao ihany koa ny mampiasa ny Terms of Service amin'ny politika mikasika ny fampiasana ny serivisy ao amin'ny tranonkala iray.
Afaka mivezivezy ianao ary mampiasa ny zava-drehetra eto amin'ity tranonkala ity. Ny fe-potoana mifandraika amin'ny tranonkalan'ny YurieBSF dia:
Afaka manararaotra ny votoaty rehetra mifandraika amin'ny zavatra ilainao ianao
Azafady mba zarao ny tapakila raha ilaina
Raha misy fanontaniana hafa, miangavy anao izahay
Fomba tsotra sy mahomby mba hahatonga ny EM4 irery ao an-trano